1. I-Salmon yeyona nto ilungele ukusetyenziswa. Intlanzi entsha yesalmon Kukho ifriji edityaniswe nayo kwisidlo sangokuhlwa. Okanye isidlo sasemini esimnandi ngokulula Ingasetyenziselwa ukupheka izitya ezahlukeneyo ngokunjalo Makhe sijonge indlela yokwenza i-salmon elula, umfazi wendlu okanye umpheki oqalayo. Ngaba ungayenza kakuhle
2. Ungazilungiselela njani ngokulula ngaphambi kokwenza
3. Okokuqala, izixhobo kufuneka zilungile. Ukulungiselela ukulawula okuqhelekileyo ukuya kwiifilim ezinkulu zeesalmon Kuya kufuneka ulungele ukuthenga i-spatula encinci encinci kunesiqhelo. Thatha enkulu kangangoko unokuyifumana.Ungayikhetha njani, yicinge loo nto Kufuneka ibe yi-spatula enokuphakamisa kwaye ijike uninzi lwenyama epanini. Kwaye iiflanzi zentlanzi zinokukhethwa okanye zigqithiselwe kwiipleyiti ezilungiswe kakuhle. Okanye ukuba kubhetele Ukuthenga i-spatula yokubambisa iintlanzi Eyilelwe ngokukodwa le njongo, lukhetho oluhle kakhulu.
4. Emva kwexesha, ndakhangela "ipani yentsimbi" efanelekileyo yokuxhela. Emva koko yibeke eontini.Umgangatho ayikho i-pan ye-Stick ithathwa njengefanelekileyo nayo. Khangela enye enokungena kwihovini eshushu. Kwaye enye inketho elungileyo yipani yokupanda ngeplani eqinisiweyo. Qiniseka ukuba isinyithi sepani asigobanga, sigobile. Xa kutyhilwa kubushushu obuphezulu ehovini Kwaye uhlobo lwe-wavy (emfanekisweni) lukwalungele ukoyisa.
5. Enye yeyona ibalulekileyo. Iipleyiti ezincinci zempumlo yenaliti (Oko kujongeka ngathi ziimpumlo) kunokusetyenziselwa ukukhupha ithambo lepini leentlanzi. Khetha ubungakanani obufanelekileyo, bomelele, umgangatho kufuneka ube ngowona uphambili. Ngenxa yokuba amathambo esikhonkwane salmon omelele kakhulu Kwaye ukutsala amathambo kufuneka kucoceke Ukufumana ubume obuhle ngokunjalo
6. Into yokugqibela kukulungiselela iphepha lesikhumba okanye ifoyile yealuminium. Ukuzisebenzisela iifillets zentlanzi esiza kuzifaka ehovini (intlanzi en papillote) kunye nepani ye-pan ye-grill.
7. Pinbones ukususwa salmon.
8. Beka ii-salmon fillets ebhodini. Ibhodi enkulu yokusika Okanye ungayifaka kwi-foil kwikhawuntara yekhitshi. Uyilo ngu Beka ulusu lujongise ezantsi. (Ngaphandle kwesikhumba) kwaye usebenzise isandla sakho ukuchukumisa ithambo elincinci elivelayo ukuze ubone ukuba liphi. Kwaye iqala esiphelweni senyama Ngokusebenzisa iipleyiti zempumlo yenaliti ukuze ubambe isiphelo sesithambo ngokuqinileyo kwaye usikhuphe.
9. Ukupheka isalmon kwitafile yeyona ndlela ilula. Ukuba awunayo okanye awufuni ukusebenzisa i-oveni Ngokuphathelele kwinkqubo yokupheka, kubandakanya UKUQEQESHWA KUNYE NOKUZIPHATHA.
10. UKUQEQESHA Ukuloba isalmon, ukuqhotsa ngokukhawuleza ngokuguqula iintlanzi ama-1-2 amaxesha kuphela usebenzisa ubushushu obuphezulu. Le ndlela ilula kwaye iyakhawuleza ukupheka. Indlela yokwenza ngolu hlobo lulandelayo
11. I-Melt 1 isipuni sebhotela epanini epanini elingaphantsi kobushushu obuphakathi. Lindela ibhotolo ukuba iwe kwaye ujike itotali yegolide emnyama, malunga nemizuzu emi-3.
12. Galela ityuwa nepepile epanini, linda imizuzu emi-6 de intlanzi ijike ibe pinki ukuba mdaka. Emva koko jika iintlanzi Ekhohlo epanini (Musa ukubuyisela iintlanzi ngapha nangapha) Linda ide iphekwe ukunambitha, enye imizuzu emi-2 ukuya kwemi-4.
13. UKUZIPHATHA ngokungekho mthethweni yisalmon ebilisiweyo eya kukunika umbala ophekiweyo kwaye mhle. Ikwayindlela entle yokwenza iintlanzi ziphekwe ngokugqibeleleyo ngaphandle kwamafutha. Iindlela ezisisiseko zezi zilandelayo.
14. Beka iiflanzi zentlanzi epanini. Emva koko yongeza amanzi epanini ngokwaneleyo ukugubungela intambo yentlanzi Emva koko, ufafaze ityuwa, ipepile kunye negqabi le-bay (ikhadiamom).
15. Yima kancinci kwaye ngokukhawuleza, emva koko ucime ubushushu, ugubungele ipani kwaye uvumele iintlanzi zipheke. Ithatha malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwengama-30. * Kule meko, isalmon ekhethiweyo kufuneka ibe phakathi nkulu ngokwaneleyo.